Maxamed Saalax oo Sharaxaad ka bixiyay Dabaal degii uu ku sameeyay Chelsea – Gool FM
Byare April 16, 2019
(England) 16 Maarso 2019. Maxamed Saalax ayaa Chelsea ku sameeyay dabaal deg aan looga baran kaddib gool gantaal ah uu ka dhaliyay qeybtii labaad wax yar kaddib goolkii Mane.
Wiilka reer Masar ayaa ku caan ahaa dabaal dega jilibka lagu taraaraxo balse goolkii caaqibada lahaa uu ka dhaliyay Blues kaddib ayuu sameeyay dabaal deg aan horey loo qorsheyn sida uu afkiisa ka qiray.
Ciyaarta kaddib mar la waydiiyay wuxuu ula jeeday dabaal dega ayuu ku sharxay inuu Jecel yahay Jimicsiga loo yaqaano Yoga sidaa darteed ay maskaxdiisa ku soo dhacday inuu habkaas u dabaal dego.
“Waxaan ahay nin ka hela Jimcsiga Yoga, waxaan sameeyaa Yoga maskaxdeyda ayayna ku soo dhacday inaan habkaas u dabaal dego.”. Saalah ayaa sidaa u sheegay Skysports.
Taageerayaasha Liverpool ayaa horey dabaal dega ugu fasiray inuu ugu jawaabayay Taageerayaasha Chelsea oo ku tilmaamay inuu yahay argagaxiso.
Goolka ayaa Maxamed Saalax uga dhigan inuu dhaliyay kiisii ugu horreeyay Premier League oo uu ka soo toogto diilinta ganaaxa bannaankeeda tan iyo bishii Janaayo 2018 gool uu ka dhaliyay Manchester City.